के हुन्छ जब जिवित चर्चित अभिनेत्रीलाई मृत भन्दै सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जलीको ओइरो लाग्छ ?:: Naya Nepal
के हुन्छ जब जिवित चर्चित अभिनेत्रीलाई मृत भन्दै सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जलीको ओइरो लाग्छ ?
काठमाडौं । एक चर्चित अभिनेत्रीको अनौठो कारणले मृत्यु भएको छ । हिन्दी र बंगाली फिल्महरूको अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जीको भर्खरै मिर्गौला फेल भएको कारण निधन भयो । तर नाम भ्रमको कारणले, सामाजिक सञ्जालमा धेरै व्यक्तिहरूले उनको ठाउँमा मिष्टी चक्रवर्तीलाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका छन् । त्यसपछि अभिनेत्रीले स्पष्ट पार्दै आफु जिउँदो भएको भन्दै ‘म पूरै फिट छु’ भनेर पनि बयान दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेकी हुन् ।
मिष्टी चक्रवर्तीले आइतवारको आफ्नो इन्स्टाग्राम पोष्टमा लेखिन्, ‘केहि मिडिया रिपोर्ट अनुसार मेरो आज मृत्यु भयो । तर भगवानको अनुग्रहले, म स्वस्थ छु र मैले लामो यात्रा गर्नुपर्दछ, मित्रहरू गलत समाचार ।’ यस पोष्टका साथ उनले फेक न्यूजको स्क्रिनशट पनि साझा गरेकी छिन् । जसमा मिष्टी मुखर्जीलाई मृत्युको खोजीमा उनको मृत्युको बारेमा बताइएको थियो ।
मिष्टी चक्रवर्तीले सन् २०१४ मा निर्देशक सुभाष घईको फिल्म ‘कांची’ बाट बलिउड डेब्यू गरेकी हुन् । यस पछि, उनी ‘ग्रेट ग्रान्ड मस्ती’ (२०१६), ‘बेगमजन’ (२०१७) र ‘मणिकर्णिका’ (२०१९) जस्ता फिल्महरूमा पनि देखा परेकी थिइन् ।
यस अघि हिन्दी र बंगाला फिल्महरूमा काम गरिसकेका मिष्टी मुखर्जीको २ अक्टुबरको रात दुबै मिर्गौला फेल भएको कारण मृत्यु भयो । रिपोर्टका अनुसार केटो डाइट लिँदा उनको स्वास्थ्य बिग्रियो । उनी २७ वर्षकी थिइन । निधनपछि उनको शनिबार दाहसंस्कार पनि गरिएको थियो ।
उनका प्रतिनिधिले उनको बयानमा भनेका छन, ‘धेरै फिल्म र म्युजिक भिडियोमा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी अब हाम्रो बीचमा छैनन् । केटो डाइटको कारण उनको दुवै मिर्गौला बेङ्गलुरुमा फेल भयो र उनले शुक्रबार राति अन्तिम सास लिइन् । अभिनेत्रीले धेरै पीडा सामना गर्नुपर्‍यो । यस्तो दुखद क्षति जुन पूरा गर्न सम्भव छैन उसको आत्माले शान्ति पाओस् । उनी आफ्ना बाबुआमा र दाइहरूले छोडेकी छन् ।’
मिष्टीले सन् २०१२ मा फिल्म ‘लाइफ की तो लाग गय’ बाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन । यस पछि उनी २०१३ को फिल्म ‘मै कृष्ण हूँ’ रजनीश दुग्गलको साथ एक गीतमा देखा परेकी थिइन् । यस फिल्ममा जूही चावला मुख्य भूमिकामा थिइन् । जबकि रितिक रोशन र क्याटरीना कैफको विशेष भुमिका थियो । यस बाहेक, मिष्टी केही आईटम नम्बरमा पनि देखिए । हिन्दी बाहेक उनले बंगाली र तेलगु फिल्महरूमा पनि काम गरेकी थिइन् ।
केटोसिसले तपाईंलाई बोसो जलाउन र छिटो तौल घटाउन मद्दत गर्दछ । केटो आहार तपाईंको स्वस्थ जीवनको अभिन्न हिस्सा हुन सक्छ । यसले कार्बको भन्दा शरीरको फ्याट बर्नलाई तिव्र बनाउन सक्छ । केटो डाईट ट्र्याकरमा सावधानीपूर्वक छनौट भएका स्वस्थ केटो व्यंजनहरू हुन्छन् जुन उच्च फ्याट, पर्याप्त प्रोटीन, कम कार्ब्स केटो व्यंजनहरू हुन् ।
यसले नेट कार्ब्स, चिनी केटोन्स, अल्छी कीटो, मधुमेह कार्ब र अधिक धेरैको अनुगमन गर्न सक्छ । एक स्वस्थ केटो आहार प्लस केटो कसरतले तपाईंको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । केटो व्यंजनहरु सित्तैमा एक स्वास्थ्यकर प्याक हो जसले तपाईलाई स्वस्थ आहार अभ्यास गर्न, म्याक्रोहरू, रगतमा चिनी केटोन्स, केटोजेनिक कार्ब काउन्टर, आदि जाँच गर्न मद्दत गर्दछ । तर खाना जान्नु भएन भने यो मृत्युको कारण पनि हुनसक्छ ।